အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ရှယ်ယာပေးချင်လို့ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
18-12-2010, 01:33 AM
ကျွန်တော်တို့မြို့လေးမှာ အီးလိုင်ဘရီ<ခေတ်မီစာကြည့်တိုက်>တစ်ခုရှိပါတယ်ဗျာ။ အဲဒီစာကြည့်တိုက်မှာ အင်တာနက် သုံးရန်အတွက် အိုင်ပီစတား(၂၅၆)လိုင်းတစ်ခုချိတ်ထားပါတယ်။ အဲဒီအင်တာနက်လိုင်းအတွက် တစ်လကို မြန်မာငွေကျပ်တစ်သိန်းနှစ်သောင်းပေးဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ချိတ်ထားတာက မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကနေပါ။ အခုလက်ရှိ အများပြည်သူသုံးစွဲနိုင်အောင် ဖွင့်လှစ်ထားပေမယ့် တစ်လကို လိုင်းကြေးနဲ့ ၀န်ထမ်းလစာအတွက် အခက်အခဲရှိနေပါတယ်။ အဲဒါကို ဒီကအုပ်ချုပ်သူလူကြီးများက မြို့ထဲကို အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ရှယ်ယာပေးချင်နေပါတယ်။ ယူမယ့်အိမ်ကလည်း (၁၅)အိမ်လောက်ရှိပါတယ်။ အဝေးဆုံးအိမ်က ၃ ဖါလုံ ခန့်ဝေးပါတယ်။ အဲဒါကို ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ရရင်အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာ ဒီဖိုရမ်က ညီအကို မောင်နှမများဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးပါခင်ဗျာ။ ကေဘယ်နဲ့ချိတ်ဆက်တာနဲ့ ၀ိုင်ယာလက်ချိတ်ဆက်တာ ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းမလဲ။ တစ်ခုချင်းစီရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ဘယ်လောက်ရှိနိုင်မလဲ။ ပစ္စည်းကောင်းကောင်းသုံးရင် ဘယ်လောက်ကျနိုင်သလဲ ။ သာမာန်လောက်ပစ္စည်းနဲ့ဆိုဘယ်လောက်ကုန်ကျနိုင်မလဲ ဆိုတာ တွေပါ အသေးစိတ်ဆွေးနွေးပေးကြပါလို့ <လေးစားစွာဖြင့်>
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ minthumon အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
တီဘွား, ယွန်းယွန်း, ရဲရဲလေး, သက်နှင်းစိုး, နေမင်းမောင်, မောင်သံသရာ, သေအောင်မုန်း, သေးသေးလေး, minthike, pannuko, phoetharlay, thureinsoe, yelinoo
ပို့စ်9ခုအတွက် 14 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ရှယ်ယာပေးခ&#
ဟုတ်တယ်ဗျာ ဒီတောင်းဆိုမှုလေးကို ကျွန်နော်လည်းစိတ်ဝင်စားလို့ စောင့်မျှော်နေပါတယ် ခင်ဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ shinli အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
တီဘွား, ယွန်းယွန်း, သေးသေးလေး, minthike, yelinoo
Find More Posts by shinli
ကျွန်တော်တို့မြို့လေးမှာ အီးလိုင်ဘရီ<ခေတ်မီစာကြည့်တိုက်>တစ်ခုရှိပါတယ်ဗျာ။ အဲဒီစာကြည့်တိုက်မှာ အင်တာနက် သုံးရန်အတွက် အိုင်ပီစတား(၂၅၆)လိုင်းတစ်ခုချိတ်ထားပါတယ်။ အဲဒီအင်တာနက်လိုင်းအတွက် တစ်လကို မြန်မာငွေကျပ်တစ်သိန်းနှစ်သောင်းပေးဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ချိတ်ထားတာက မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကနေပါ။ အခုလက်ရှိ အများပြည်သူသုံးစွဲနိုင်အောင် ဖွင့်လှစ်ထားပေမယ့် တစ်လကို လိုင်းကြေးနဲ့ ၀န်ထမ်းလစာအတွက် အခက်အခဲရှိနေပါတယ်။ အဲဒါကို ဒီကအုပ်ချုပ်သူလူကြီးများက မြို့ထဲကို အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ရှယ်ယာပေးချင်နေပါတယ်။ ယူမယ့်အိမ်ကလည်း (၁၅)အိမ်လောက်ရှိပါတယ်။ အဝေးဆုံးအိမ်က ၃ ဖါလုံ ခန့်ဝေးပါတယ်။ အဲဒါကို ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ရရင်အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာ ဒီဖိုရမ်က ညီအကို မောင်နှမများဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးပါခင်ဗျာ။
တစ်ဘက်တစ်လမ်းကနေ ၀င်ငွေရှာပြီး စာကြည်တိုက်အတွက် အွန်လိုင်းသုံးစွဲမှု သက်တမ်းလေး ပိုရှည်အောင် အခုလို စဉ်းစားတာကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ. လိုင်းခွဲရမှာ (၁၅)လုံးလောက်ဆိုတော့ ရနိုင်ပါတယ် သင့်တင့်တဲ့ အမြန်နှုန်းနဲ့တော့ သုံးကြရမှာပေါ့... လိုင်းခွဲပေးရမဲ့ Location က အတိအကျမသိရတော့ မှန်းပြီးတော့ ပြောပါရစေဗျာ အဝေးဆုံးက ၃ ဖာလုံလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ ၉၅ မီတာ မှာ Switch တစ်ခုဆီထားမယ်ဆိုရင် Switch ခုနှစ်လုံးခန့်လောက်တော့ ထားရပါ့မယ် အဲဒီ Switch တွေကနေမှ နီးစပ်ရာ အိမ်တွေဆီကြိုးတွေကို ဆက်သွယ်ပေးရပါ့မယ်
ကေဘယ်နဲ့ချိတ်ဆက်တာနဲ့ ၀ိုင်ယာလက်ချိတ်ဆက်တာ ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းမလဲ။
သုံးဖာလုံလောက် အကွာအဝေးဆိုရင်တော့ ကေဘယ်လ်နဲ့ ချိတ်ဆက်တာဘဲ သင့်တော်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်
တစ်ခုချင်းစီရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ဘယ်လောက်ရှိနိုင်မလဲ။ပစ္စည်းကောင်းကောင်းသုံးရင် ဘယ်လောက်ကျနိုင်သလဲ ။ သာမာန်လောက်ပစ္စည်းနဲ့ဆိုဘယ်လောက်ကုန်ကျနိုင်မလဲ ဆိုတာ တွေပါ အသေးစိတ်ဆွေးနွေးပေးကြပါလို့
Switch တစ်လုံးကို ၂သောင်းဝန်းကျင်ခန့်ရှိတယ်ဆိုတော့ Switch ဖိုးက တစ်သိန်းခွဲခန့်ရှိပါ့မယ်
ကေဘယ်လ်ကတော့ အိမ်တွေနဲ့ Switch တွေရဲ့အကွာအဝေးပေါ်မူတည်ပြီး ကုန်ကျမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အတိအကျ မမှန်းနိုင်ပါ မီတာ 300 တစ်ဗုံးကို သုံးသောင်းဝန်းကျင်မှ ကိုးသောင်းဝန်းကျင်ခန့်ရှိပါတယ်
စာကြည်တိုက်ကနေ Switch တွေ တစ်ခုချင်းစီကို ဆက်သွယ်တဲ့ ကြိုးဖိုးနဲ့ Switch ဖိုးကိုတော့ စာကြည့်တိုက် တာဝန်ခံများဘက်က ကျခံပေးပြီး မိမိအိမ်နဲ့ နီးစပ်ရာ Switch ကိုဆက်သွယ်နိုင်မဲ့ ကြိုးဖိုးကိုတော့ သက်ဆိုင်ရာ အိမ်ကနေ ကျခံပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အကုန်အကျသက်သာပြီး လုပ်ငန်းလည်းဖြစ်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင် 29 ဦးတို့မှ kozaw.dagon အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
တီဘွား, ပင်းယ, မိုးလွင်, ယွန်းယွန်း, ရဲထွတ်, ရဲရဲလေး, ဝင်းကျော်ဦး, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, သေးသေးလေး, အောင်မိုးထွန်း, ငြိမ်းချမ်း, arkaraung, aungphyo, bonge, hellboy, ko lin, KznT, minthike, minthumon, pannuko, phoetharlay, thurein, thureinsoe, tu tu, yelinoo, Zin Ko
ပို့စ် 11 ခုအတွက် 79 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော့ အမြင်ကတော့ Wire ကိုအသုံးပြုပြီး Connection Share လုပ်မယ်ဆိုရင် အခက်အခဲတွေရှိနေနိုင်သလို နောက်ပိုင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရာမှာလဲ အခက်အခဲများစွာ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဆက်သွယ်ပေးမယ့် အိမ်တွေ ပြီးတော့ Switch တွေထားမယ့် အိမ်တွေက ဒီ Network Switch တွေ ကြိုးတွေကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတာ နားလည်မယ့်သူ (သို့) တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ဘယ်လို ပြုပြင်ရမယ်ဆိုတာ သိတယ့်သူ ရှိပါ့မလား???
ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ Wireless Outdoor AP ကိုအသုံးပြုပြီး Internet Connection Share ကိုဖြေရှင်းမယ်.။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Wireless AP ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် Wireless AP ကလွဲလို့ကျန်တယ့် Computer တွေကို လိုက်စစ်စရာမလိုဘူးလေ။ ပြီးတော့ အခုလက်ရှိအသုံးပြုနေတယ့် သူတွေအပြင် တစ်ခြားသူတွေကပါ သုံးချင်တယ်ဆိုရင် အလွယ်တစ်ကူ တိုးချဲ့လို့ရပါတယ်။ Wire Network (Cable) ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ နောက်ထပ်အသစ်တိုးတိုင်းတိုးတိုင်းမှာ ကြိုးတွေထပ်ဆွဲရတာ၊ Switch တွေထပ်ဝယ်ရတာတွေဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Wireless ကိုအသုံးပြုဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
Engenius ECO2611P ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် 1Km ကနေ 30Km အကွာအဝေးအထိ အသုံးပြုလို့ရနိုင်ပါတယ်။ Wireless အသုံးပြုမယ့် Computer တွေမှာတော့ Desktop ဆိုရင် Wireless PCI Card ထပ်မံတပ်ရမှာဖြစ်ပြီး Laptop ဆိုရင်တော့ Wireless USB Adapter ကိုထပ်တပ်ရမှာပါ။ ဈေးနှုန်းအနေနဲ့လဲ Engenius ECO2611P က တစ်သိန်းခွဲဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီး Wireless PCI Card နဲ့ Wireless USB Adapter ကတော့ လေးသောင်းခွဲဝန်းကျင်ခန့်ကုန်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ကယ်လို့ ရန်ကုန်ကနေ နေ့ချင်းပြန်သွားလို့ ရတယ့် မြို့လေးဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် Survey ဆင်းပြီး အသေးစိတ်တွက်ချက်ပေးလို့ရပါတယ်။ သွားလာစရိတ်နဲ့ စားသောက်စရိတ်တော့ အကိုတို့ ဘက်က တာဝန်ယူမယ်ဆိုရင်ပေါ့။ :P
Engenius ECO2611P အကြောင်းအသေးစိတ် သိချင်ရင် သွားရောက်ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
Last edited by tu tu; 06-01-2011 at 09:23 PM.. Reason: merge posts
အောက်ပါအသင်းဝင် 27 ဦးတို့မှ Spirit အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချယ်ရီမင်း, တီဘွား, ပင်းယ, ယွန်းယွန်း, ဝင်းကျော်ဦး, နေမင်းမောင်, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, သေးသေးလေး, အောင်မိုးထွန်း, aaa00234, arkaraung, aungphyo, AZM, hellboy, HTUT KHAUNG, juwathan, ko lin, kozaw.dagon, kyawswarl, minthike, minthumon, thureinsoe, tu tu, yelinoo, Zin Ko, zin min aung
ပို့စ် 1 ခုအတွက် 16 ဦးမှကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
တချို့ pci nic card တွေက ပေတစ်ရာလောက်ပဲ အလုပ် လုပ်တယ် စာကြည်တိုက်နဲ့ဝေးတဲ့အိမ်တွေက အဆင်ပြေမှာဟုတ်ဘူး အဲဒီတော့ Internet Speed ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် Back bone လုပ်ဖို့လိုလိမ်မယ်
အောက်ပါအသင်းဝင် 16 ဦးတို့မှ ခိုင်လင်းဇော် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
တီဘွား, ယွန်းယွန်း, ဝင်းကျော်ဦး, နေမင်းမောင်, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, သေးသေးလေး, aungphyo, AZM, kozaw.dagon, minthike, minthumon, thurein, tu tu, yelinoo, Zin Ko
Find More Posts by ခိုင်လင်းဇော်
ပို့စ်2ခုအတွက် 18 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပေတရာကျော်လောက်ရှိရင် wireless ကအဆင်ပြေပါ့မလား?cable နဲ့ ကပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့သိပ်မသိပါဘူး။ထင်တာကိုပြောပြတာပါ။မှားရင်တော့ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ နေလှိုင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
တီဘွား, ယွန်းယွန်း, ရဲရဲလေး, နေမင်းမောင်, မောင်သံသရာ, သေးသေးလေး, minthike, minthumon, sheinsoe, yelinoo, Zin Ko
Visit နေလှိုင်း's homepage!
Find More Posts by နေလှိုင်း
ပြန်စာ - အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ရှယ်ယာပေးခ&a
ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်းတာ server အပိုင်ပါ internet sharing အတွက်ဆိုရင်
ICS INTERNET SHARING SERVER
တို့ဖြစ်တယ် ဒီသုံးမျိုးထဲမှာ ကျွန်တော် ပို့ ကြိုက်တာက proxy server
ဘာကြောင့် proxy server ကြိုက်တဲ့အကြောင့်ရင်က သူ့အားသာချက်တွေအများရှိတယ်
ics မှာဆိုရင် Internet အတွက် computer 254 အသုံးပြုနိုင်တယ် ip အနေနဲ့ပြောရင် 192.169.0.254 submask 255.255.255.0 C class အမျိုစာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရသလဲဆိုရင် isc server ကို run ပြီး internet sharing ပေးလိုက်တာနဲ့ အသုံးပြုခွင့်ရှိတဲ့ ipသည် C class ဖြစ်ရမယ်၊၊
(ဆရာဇော်လင်စကားအရပြောရရင်တချိန်ကအသုံးများခဲ့ပေမဲ့ proxy serverကိုအပြုသူများတဲ့နောက်ပိုင်မှာ ISC အသုံးနည်းလာတယ်)
proxy server တွေမှာ အားသာချက်များကိုပြောရရင် LAN အတွင်းမှာရှိကွန်ပျုတာတိုင်ကိုကြိုက်တဲ့ ip A/B/C/ကိုပေးလိုရတယ်
နောက်အားသာချက်များကလည်း proxy server ကဖွင့်ပေးထားတဲ့ websites များကိုသာကြည့်ခွင့်ရှိတယ်ကိုယ့်ပေးမကြည့်စေ
ချငိတဲ့ websiteများကိုလညိပိတ်ထားနိုင်တယ် ၊၊ဘယ်အချိန်မှာအင်တာနက်ကိုသုံးနိုင်သလဲ
ဘယ်အချိန်မှာမသုံးနိုင်ဘူးဆိုတာကို ကြီးကြပ်နိုင်တယ် user များသုံးသွားဆိုက်များကိုလည်ပြန်ကြည်မယ်ဆိုရင် proxy server log file ကနေ ပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
Last edited by thureinsoe; 17-09-2011 at 03:37 PM..
တီဘွား, ရဲရဲလေး, နေမင်းမောင်, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, သေးသေးလေး, azp09, g00gle, hightechkey, ko lin, minthike, minthumon, yelinoo, Zin Ko
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ thuya အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
တီဘွား, ယွန်းယွန်း, ရဲရဲလေး, နေမင်းမောင်, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, သေးသေးလေး, hightechkey, ko lin, minthike, minthumon, thureinsoe, yelinoo
ပို့စ်2ခုအတွက် 17 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော် တို့ က တရုတ် မှာ အလုပ်လုပ်နေတာပါ .. ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာ တော့နားမလည်ဘူး .. အကို့ပိုစ့်ကို တွေ့လို့ စက်ရုံက ကွန်ပျူပြင်တဲ့သူကိုမေးကြည့်တော့ သူက ရိုးရိုး ၀ိုင်ဖိုင် ကို ၀ိုင်ဖိုင် ဘူစတာ နဲ့ ကွန်နယ်ရှင် ကို အဝေး ရောက်အောင်လုပ်ထားတာ တဲ့ .... 4w က ၁.၅ မိုင်အချင်း လောက်ရတယ်လို့ပြောတယ် ဈေးနှုန်းက တရုပ်ငွေ 1800 ယွမ် (245000 ကျင် ၀န်းကျင်)လောက်ရှိမယ်တဲ့ ... အဝေး က သုံးမဲ့စက်တွေမှာ လဲသုံးဖို့ အိမ်တိုင်းမှာ အင်ဒိုး ဘူစတာ 600 (83000 ကျပ်)ယွမ်တန်တတ်ရမယ်လို့ပြောတယ် ... အခုကွန်တော်တို့တုန်းနေတာ တော့ ကောင်းနေတာ ပဲ video လဲ ကောင်းကောင်းကြည့်လို့ရတယ် တရုပ်လိုင်းလို့လား မသိဘူး ... မြန်မာလိုင်းနဲ့ မသိဘူး .....
ကွန်တော်သိပ်နားမလည်လို့ ကောင်းကောင်း မရှင်းပြတတ်ဘူး .. အသုံးတည့်မယ်ထင်လို့ မေးပေးလိုက်တာပါ ........
အောက်ပါအသင်းဝင် 15 ဦးတို့မှ aeiou အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
တီဘွား, ယွန်းယွန်း, နေမင်းမောင်, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, သေးသေးလေး, အောင်မိုးထွန်း, AZM, bonge, crush, minthike, minthumon, pannuko, tu tu, yelinoo
13-03-2011, 05:09 PM
အခုလိုဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အခုကျွန်တော်တို့ဆီမှာစတင်တပ်ဆင်နေတဲ့အနေအထားကို အားလုံးသိအောင် ဖေါက်သည်ချပေးပါရစေ။ သိပြီးသားလူတွေရှိတယ်ဆိုပေမယ့် မသိသေးတဲ့လူတွေကိုလည်း သိစေချင်လို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ အခု TP-LINK Wireless Outdoor CPE(2.4 GHz High Power)(Model No.TL-WA5210G) ကို သုံးလိုက်တာ အဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျ။ ဈေးနှုန်းကတော့ လေးသောင်းခွဲဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်။ စာကြည့်တိုက်မှာ တိုင်မြင့်မြင့် (ပေ-၈၀ ခန့်)ထောင်ပြီးတင်ထားလိုက်တယ်။ အိမ်တွေမှာ လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလို တိုင်ထောင်ပြီး အဲဒါမျိုးတစ်လုံးတင်ထားပေးတယ်။ သိပ်မလိုတဲ့အိမ်မျိုးဆိုရင် TP-Link High Power Wireless USB Adapter ကို သုံးလိုက်တယ်။ ကွန်နက်ရှင်လည်းအတန်အသင့် ကောင်းပါတယ်။အခုတော့တပ်ဆင်နေဆဲပါ။ အားလုံးကို လေးစားစွာဖြင့်
အောက်ပါအသင်းဝင် 18 ဦးတို့မှ minthumon အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ယွန်းယွန်း, ရဲရဲလေး, ဝင်းကျော်ဦး, နေမင်းမောင်, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, အောင်မိုးထွန်း, AZM, azp09, bagothar85, crush, g00gle, hightechkey, minthike, pannuko, tu tu, yelinoo, zoard
minthumonအကို သုံးနေတဲ့လိုင်းနဲ့ အတူတူပါပဲ ipstar 256 ပါပဲ
၁။TP-LINK Wireless Outdoor CPE(2.4 GHz High Power)(Model No.TL-WA5210G)
(ဈေးနူန်း = ၄ သောင်းခွဲဝန်းကျင်)
၂။ TP-Link High Power Wireless USB Adapter ( ဒါကနီးတဲ့ အိမ်တွေအတွတ် )
(ဈေးနူန်း = ? )
လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းက အဲ့(၃)မျိုးပဲလား။
ပြီးတော့ခုအကိုဆီမှာ ၀ယ်ပြီးသုံးနေတဲ့ USER တွေရောသုံးရတာအဆင်ပြေရဲ့ လား( Connection )။
ဘယ်နှစ်လုံးလောက်အထိအကိုပေးထားလဲ။အကိုဘယ်ဆိုင်တွေက ၀ယ်တယ်ဆိုတာလေးပါ ညွန်ပြပေးပါလား။
network security key ပေးထားရမှာဆိုတော့ signal မိတဲ့နေရာမှာ တိုင်ထောင် ပြီးပွားသုံးမှာလဲကြောက်ရသေးတယ်။ အကိုရော့ဘယ်လို့security ထားလဲဟင်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ မျိုးဟန်ထက် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ယွန်းယွန်း, ရဲရဲလေး, နေမင်းမောင်, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, AZM, bonge, hightechkey, minthike, minthumon, yelinoo
အားလုံးကို ဆတ်လတ်ဆွေးနွေး ဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်တယ်ခင်ဗျာ.
နယ်မှာဆိုတော sky နတ်တွေမပေါ်ခင်က ipstar ကိုသုံးနေတာပါ။
ခု skyနတ်နဲ့ လွှင့်နေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ အဆင့်ပြေနေတာတွေရပါတယ်။
မြိုလေးက ကျဉ်းပါတယ် တစ်မိုင်ပတ်လည်ပေါ။
kominthumon ယူထားတဲ့လိုင်းနဲ့ တူတူပါပဲ့။သူလည်းအလုပ်များနေတယ်နဲ့ တူတယ်။
ညီငယ်မေးထားတာ Relapy မပြန်သေးဘူး။
မိသားစုင်တို့ ၏ ဆွေးနွေးရှင်းပြခက်များကိုအကိုးတကြီးစောင့်မျှော်လျှက်။
ယွန်းယွန်း, နေမင်းမောင်, g00gle, hightechkey, minthike, minthumon, yelinoo
28-03-2011, 08:08 AM
Originally Posted by မျိူးဟန်ထက်
ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကို ခရီးသွားနေလို့ ကိုဟန်မျိုးထက်ပို့စ်ကို အခုမှတွေ့လို့ reply ပြန်လိုက်ပါတယ်။ Outdoor CPE ဈေးနှုန်းက ၄၄၉၀၀ိ/-ဖြစ်ပါတယ်။ 7200 High Power Wireless USB Adapter ဈေးနှုန်းက ၂၇၀၀၀ိ/-ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန် ဆိပ်ကမ်းသာ လမ်းထဲမှာ အလွယ်တကူဝယ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ တင်သွင်းတာကတော့ Neo-Tech နဲ့ Life-Mark (သူ့တို့တွေက မောင်နှမတွေ)က သွင်းတာပါ။ အင်တာနာကတော့ ၇၀၀၀ိ/-(ခန့်မှန်း)လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။
အခုကျွန်တော်တို့မှာ သုံးနေတာက ယူဇာ(၂၁)ယောက်ပါ။အားလုံး အဆင်ပြေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆင်တုန်းကတော့ Neo-Tech နဲ့ တခါတည်း ချိတ်ပြီးသူတို့လာဆင်ပေးတာ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Sercurity အတွက် router အသစ်တစ်လုံးထပ်ဝယ်လိုက်တယ်။ Mac Filter လုပ်မယ်ဆိုရင် (၁၆)လုံးထိရတယ်။ ကျွန်တော်တို့က (၁၆)လုံး ကျော်နေတော့ သီးသန့် Firmware ပြန်ရေးရတယ်။ လိုအပ်ရင် ကူညီပေးပါမယ်။ ကျွန်တော့် gmail လိပ်စာက minthu35032@gmail.com ပါ။ ဒါပေမယ့် အခုရန်ကုန်သွားနေတုန်းဘယ်သူဝင်ကလိထားတယ်မသိဘူး။ ဖွင့်လို့လည်း မရဘူး။လော့ကျနေတယ်။ littlegipsybird@gmail.com ကို မေးလ်ပို့ပြီးအသေးစိတ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်. . ကိုဟန်မျိုးထက်ရေ.. .အခက်အခဲရှိရင် ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်သိပ်မဝေးဘူးဆိုရင် ကိုယ်တိုင်လာရောက်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်. . .ကိုဟန်မျိုးထက်ဘယ်မှာနေလဲဆိုတာပို့စ်တင်ခဲ့ပေးပါ။ . .လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ သိပ်မလောပါနဲ့. ..အသေးစိတ်အရင်လေ့လာပါ။ ယူမယ့်အိမ်တွေနဲ့ ဖြန့်မယ့်နေရာအကွာအဝေး. . .ကြားမှာ ရှိနိုင်မယ့် သစ်ပင်၊ အဆောက်အဦးမြင့်မြင့်. . .ရှိရင် သေချာနားလည်တတ်ကျွမ်းမှုရှိတဲ့သူနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးလုပ်စေချင်ပါတယ်။ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေ့လာပြီးမှ ပစ္စည်းဝယ်ဖို့ တပ်ဆင်ဖို့ကိစ္စတွေကို ဆက်လုပ်စေချင်ပါတယ်။လေးစားစွာဖြင့်. . .
အောက်ပါအသင်းဝင် 19 ဦးတို့မှ minthumon အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
တီဘွား, မျိုးဟန်ထက်, ယွန်းယွန်း, နေမင်းမောင်, မေဦးမွန်, မောင်ပေါ်ဦး, aungphyo, AZM, bagothar85, bonge, crush, g00gle, hightechkey, KznT, minthike, PyaitSone, thureinsoe, tu tu, yelinoo
28-03-2011, 10:55 PM
TP-LINK Wireless Outdoor CPE(2.4 GHz High Power)(Model No.TL-WA5210G) အကြောင်းကိုတော့ ဒီနေရာလေး မှာကြော်ငြာထားလို့ ဖတ်လိုတ်ရတယ်။
security အနေ နဲ့ Mac Filter သုံးတာဆိုတော် စိတ်ချရပါတယ်။ ညီတို့ဆီမှာ အများဆုံး ပေးမှ ( ၇ ) လုံးလောက်ဆိုတော့
ညီတို့ ကမော်ကျွန်းမှာ စို တော့ အကိုနဲ့ ဝေးလောက်တယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ မျိုးဟန်ထက် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
တီဘွား, ယွန်းယွန်း, ရဲရဲလေး, မောင်ပေါ်ဦး, crush, hightechkey, minthike, minthumon, yelinoo
ပို့စ် 211 ခုအတွက် 1,117 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
TP LINK နဲ့ MAC address filter လုပ်သွားလို့
ကျွန်တော်တိုံမြို့လေးမှာအခုတလော TP LINK ကနေ internet ယူကြတာတော်တော်များလာပါတယ်.....internet ပေးတဲ့လူတွေက sky net ကနေတဆင့်ပေးတာပါ......
ကျွန်တော်လည်းသုံးချင်လိုTP LINK ကတဆင့်ယူလိုက်ပါတယ်.....Tp link ဘူး+ကြိုး+တပ်ဆင်ခ ကို၆၇၅၀၀ ပေး၇ပြီး.....လစဉ်ကြေးက တလ ၃၀၀၀၀ ပါ...
ကြိုတင်ပြီးတော့ဘာမှမပြောပဲ.....internet ဆင်တဲ့နေ့ကြမှ....MAC address filterလုပ်ပြီး(MAC address သတ်မှတ်ထားတဲ့ computer တလုံးတည်းပဲသုံးလို့၇အောင်လုပ်သွားပါတယ်
အခုလိုလုပ်တာ...လွပ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့နည်းပြညာခေတ်ကြီးထဲမှာမဖြစ်သင့်ဘူးလိုယုံကြည်ပါတယ်....ဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်က connection တခြားလူတဦးတယာက်ကို ပြန် share ခြင်လို့မဟုတ်ပါဘူး.....phone နဲ့ wifi လောက်ပဲသုံးချင်တာပါ.....
အဲဒါကို...MAC address filter လုပ်ထားတာကိုကျော်လို့၇နိုင်မလား?
ကျွန်တော်တပ်ထားတဲ့ TP link ဘူး model က TL-WA5210Gပါ....
TP link ဘူးထဲကို IE ထဲကနေ၀င်တဲ့default user nameနဲ့ passwordကိုလည်းတပ်ဆင်သူကပြင်သွားပါတယ်...
အဲဒီ....MAC address filterကိုဘယ်လိုကျော်ပြီး တခြား computer or wifi phone ကိုconnection ဘယ်လို share ၇မလဲ ခင်ဗျာ....ဖို၇မ်မှညီအကိုများကူညီကြပါဦး.........
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ azp09 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
တီဘွား, မျိုးဟန်ထက်, minthike, minthumon, nyi.nyi, yelinoo
Find More Posts by azp09
ပို့စ်7ခုအတွက် 34 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - TP LINK နဲ့ MAC address filter လုပ်သွားလို့
mac filtering လုပ်တာကို ကျော်လို့တော့ မရပါဘူး။ အစ်ကိုက wifi သုံးချင်တယ်ဆိုတော့ wireless router ပြန်ခံမှ ရပါမယ်။ အစ်ကို့အနေနဲ့ သုံးမှာက တစ်လုံးထက် မပိုဘူးဆိုရင်တော့ ( ဆိုလိုတာက ကွန်ပြူတာ သုံးနေရင် wifi phone မသုံးဘူးပေါ့။) ဆိုင်နဲ့ ညှိလိုက်ပါ။ ပိုက်ဆံလည်း ပိုမပေးရဘူး၊ အစ်ကိုသုံးချင်တဲ့ wifi လည်းသုံးလို့ရအောင် wireless router တစ်လုံး ၀ယ်ပြီးသူတို့ကို configure လုပ်ခိုင်းလိုက်ပါ။ နှစ်မျိုး သုံးရပါမယ်။ တစ်လ သုံးသောင်းကတော့ များတယ်ဗျ။ ဒီရန်ကုန်မှာတော့ နှစ်သောင်းလောက်ပဲ ရှိတယ်။ သုံးသောင်းယူတဲ့လူလည်း ယူပါတယ်။ သုံးသောင်းဆိုတော့ ကွန်ပြူတာနှစ်လုံး သုံးချင်တယ်လို့ တောင်းဆိုကြည့်ပေါ့။ ဒါမှ မဟုတ် တစ်ခြား ဆိုင် ရှိရင်လည်း တစ်ခြားဆိုင်ကိုမေးကြည့်ပေါ့။ အစ်ကိုက cpe ကို ၀ယ်ထားတာပဲ။သူ့ဆိုင်မကြိုက်ရင် တစ်ခြားဆိုင် ပြောင်းချိတ်လို့ရတယ်။ ဒါက customer right ပဲ။ ကျွန်တော်လည်း ရန်ကုန်မှာ လက်ရှိပေးနေတာပါ။ လစဉ်ကြေး ၂၀၀၀၀ ပါ။ နှစ်လုံး သုံးချင်ရင် သုံးသောင်းပါ။ သူတို့ကတော့ wireless router ၀ယ်ပေါ့။ configure လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ wifi လည်း သူတို့သုံးကြတယ်။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် အဲဒီမှာ skynet နဲ့ သုံးရတာ လိုင်းကောင်းလား။ ဒီရန်ကုန်မှာ မိုးများတော့ skynet သုံးတဲ့လူတွေက လိုင်းကောင်းဘူးပြောကြလို့။
Originally Posted by azp09
Last edited by myatminchit; 01-09-2011 at 09:14 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ myatminchit အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မျိုးဟန်ထက်, azp09, crush, hightechkey, minthike, minthumon, nyi.nyi, tu tu, yelinoo, zo
Find More Posts by myatminchit
Wireless Router က....ကျွန်တော်မှာ၇ှိပြီးသားပါ.....တပ်ဆင်သူတွေကWireless Routerကိုပေးမသုံးချင်တာ....
ကျွန်တော်၇ဲ့ wireless router နဲ့လည်းစမ်းကြည်ံပြီးပါပြီ....Router ကို TP Link LAN ကလာတဲ့ RJ 45 cableထိုးကြည့်တော့....Router မှာ internet ကို detect သိပါတယ်....ဒါပေမယ့် တခြား wireless deviceတွေကို internet Access လုပ်လို့မ၇တာပါ (MAC filterလုပ်ထားလို့.....)။ သူတို့ MAC addressသတ်မှတ်ပေးခဲ့တဲ့ laptopမှာပဲ(cable ဖြင့်)သုံး၇တာပါ......
အဲဒါ.....wireless routerကို Internet သုံးလို့၇အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ.....?????
နောက်ပြီး TP LINK ဘူးထဲကို Internet Explorer ကနေ၀င်တဲ့ default user နဲ့ password ကိုပါပြောင်းသွားတာပါ....
(ဒီနေ၇ာမှာ ....ခင်ဗျားဗျာ...computerတလုံး internet သုံးလို့၇နေပြီပဲဗျာ....တော်ေ၇ာပေါ့.....မကျေနပ်နိုင်သေးဘူးလားလို့မေး၇င်လည်းမေးနိုင်ပါတယ်)
ဟုတ်ပါတယ်.....computerတလုံး internet၇ ၇င်ကျွန်တော်အတွက်လုံလောက်ပါတယ်........
ကျွန်တော့် iphone ကို jailbreak လုပ်တဲ့အခါ။ cydia ထဲက application တွေကို installလုပ်၇န် wi fi connection မ၇ှိမဖြစ်လိုအပ်လို့ပါ........
အဲဒါကြောင့်သိတဲ့ brother များကူညီကြပါဦး......
ဒီမှာ connection ကမနက်ပိုင်းတော့မကောင်းပါဘူး
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ azp09 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
crush, hightechkey, minthike, minthumon, nyi.nyi, yelinoo, zo
အခု အချိန်မှာတော့ အင်တာနက် ရှယ်ယာပေးတာက wireless နဲ့ပေးတာ တော်တော်ကို တွင်ကျယ်နေပါပြီ။ အင်တာနက်ဆိုင်တွေဆို ဆိုင်အတော်များများ
ပေးကြတယ်။ wireless ပစ္စည်းတွေကလည်း ဈေးက တော်တော်ကျတာကိုး။
အခု အသုံးများဆုံးကတော့ TP Link ပါပဲ။ CPE 5210 G တွေ တော်တော် သုံးကြတယ်။ လွှင့်တာရော ဖမ်းတာရော လုပ်လို့ရတော့ အဆင်ပြေတယ်။
နယ်တွေမှာဆို မြို့တွေက သိပ် အကျယ်ကြီးမဟုတ်တော့ cpe ကို 15 dbi omni directional antenna ( မီးချောင်းလိုဟာမျိုး) တွဲပြီးတော့ တိုင်မြင့်မြင့်သာထောင်လိုက်ပါ။ တစ်ခုတည်းနဲ့ ပတ်လည် စိတ်ကြိုက်လွှင့်လို့ရပါတယ်။ သိပ်ဝေးဝေးသွားချင်ရင်တော့ omni မသုံးနဲ့။ cpe ကို လေးလုံးလောက် အရပ်လေးမျက်နှာလှည့်ပြီး ထောင်ထားလိုက်။ အကာအကွယ်၊လွတ်ရင် လေးမိုင်ပတ်လည်လောက်အေးဆေးမိတယ်။
ွှTP Link က သူ့ဈေးနဲ့သူ သုံးပျော်ပါတယ်။ quality လည်း မဆိုးပါဘူး။
ကြိုက်တာကတော့ Engenius ဗျ။ ဈေးက မြင့်တော့ မတတ်နိုင်ဘူး။
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ myatminchit အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
crush, minthike, minthumon, nyi.nyi, tu tu, yelinoo, zo
အဲ့ဒီ tp link က reset button ကို သုံးပြီး reset ချလိုက်ရင် မရနိုင်ဘူးလား?? ဒါဆို password က factory default ပြန်ဖြစ်သွားမယ်။ ပြီးတော့မှ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်ပြီး configure ပြန်လုပ်ပေါ့။
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ nyi.nyi အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
တီဘွား, azp09, crush, minthike, tu tu, yelinoo, zo
ကိုမြတ်မင်းချစ်ပြောတဲ့ Mac Filter လုပ်ထားတဲ့ Wirless router က ကွန်နက်ရှင်ရှယ်ယာပေးတဲ့ဆိုင်မှာရှိတာထင်ပါတယ်...အဲဒါကို ရီဆက်လုပ်ဖို့အက်မင်ကခွင့်ပြုမယ်မထင်ပါဘူး...iphone ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်မယ်ဆိုပေမယ့်လည်း သူ့ရဲ့မက်ကို router က accept လုပ်မှဖြစ်မှာပါ....အက်မင်ကခွင့်ပြုမှာရနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်....ခင်မင်ရင်းနှီးမှုရှိရင်တော့ အက်ဒမင်ကို အကျိုးအကြောင်းပြောပြီးအကူအညီတောင်းကြည့်ပါလား...update and install application လုပ်ရုံလောက်ကိုတော့ နားလည်မှုရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်....ကျော်ဖို့ကတော့(ရရင်လည်းရမှာပါ. .)မလွယ်လောက်ဘူးထင်ပါတယ်....လေးစားစွာဖြင့်
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ minthumon အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
တီဘွား, azp09, hightechkey, minthike, tu tu, yelinoo
Originally Posted by nyi.nyi
ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ ကိုညီညီကော,ကိုminthumon ကိုေ၇ာကျေးဇူးပါ.......
ကိုညီညီဆွေးနွေးတဲ့ နည်းအတိုင်း TP LINK က restat ကိုချလိုက်ရင် TP link Box ကို internet explorer ကနေ၀င်ပြီး configure ချလို့၇သွားတာဟုတ်ပါတယ်......
restart ချပြီး configure ပြန်လုပ်တဲ့အခါ Main server ၇ဲ့ password ကိုတောင်း၇င်......
၇ှိနေတဲ့ internet connection လေးပါပျောက်သွားမှာပါ....
internet ဆိုင်ကလည်း wireless Routerကိုလုံးဝမသုံးစေချင်တာ....
iphone ကို jailbrek လုပ်ဖို့ကလည်း wifi ကမ၇ှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်.........
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ azp09 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စနိုးလေး, တီဘွား, crush, hightechkey, minthike, minthumon, nyi.nyi, yelinoo, zo
ဒါဆိုရင်တော့ အစ်ကိုသုံးချင်တဲ့ပုံစံလည်းရအောင်၊ ဘယ်လိုလုပ်ရင် ရနိုင်လဲလို့ စဉ်းစားကြည့်တော့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာက
1။ သူတို့ ဆင်ပေးသွားတာက pc ဆိုရင် အဲဒီမှာ NIC တစ်ကဒ် ထပ်စိုက်ပြီး
ICS နဲ့ connection share ပေး၊ရပြီဆိုရင် အဲဒီ စိုက်လိုက်တဲ့ NIC က နေ router
ကို ကြိုးနဲ့ဆက် ။ wifi လုပ်။( ဒါပေမယ့် အခုဟာက သူတို့ လုပ်ပေးသွားတာ
laptop ဖြစ်နေတယ်။ ဒီတော့ ဒီနည်းနဲ့ လုပ်လို့ရနိုင်ပေမယ့်အဆင့်များသွားမယ်။
usb to ethernet adapter လေးဝယ်ပြီးတော့ RJ 45 ခေါင်းထွက်အောင် လုပ်လို့
ရနိုင်တယ်။ မစမ်းဘူးသေးတော့ ရမရ သေချာ မပြောနိုင်ဘူး။
2။ နောက် တစ်နည်းက laptop ဆိုတော့ wireless က built in ပါပြီးသား။ ပုံမှန်ကတော့ wireless ကို ဖမ်းပြီးသုံးဖို့ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒါကို wifi လို ပြန်လွှင့်လို့ရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား ဆိုတာ Google မှာ မွှေကြည့်တော့ ဒါလေးတွေ့တယ်။ http://virtual-ap.com/
လိုရင်းကတော့ လက်တော့မှာ lan ကနေရှိနေတဲ့ အင်တာနက်ကို ဆော့ဝဲသုံးပြီး လက်တော့ wireless နဲ့ပြန်လွှင့်တာပဲ။ ဒါကို iphone, laptop တို့နဲ့ ချိတ်ပြီး အင်တာနက်သုံးလို့ရတယ်တဲ့။ ဆော့ဝဲကိုဒေါင်းပြီး စမ်းကြည့်ပေါ့။ trial version ဆိုတော့ သုံးလို့ရရင် full version ရအောင် ကိုညီနေမင်း ကို အပူကပ်ပေါ့။
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ myatminchit အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
azp09, crush, hightechkey, minthike, minthumon, nyi.nyi, tu tu, yelinoo, zo
Internet ဆိုင်က...ကျွန်တော်ကိုပေးသုံးတဲ့ MAC address 2ခု၇ှိပါတယ်(Computer 2လုံးသုံးနိုင်အောင်)
ပထမ MAC address ကိုဘာမှမလုပ်ပဲဒီတိုင်းထားပါတယ်
ဒုတိယ MAC address ကို...ကျွန်တော်သုံးမဲ့ linksys router ထဲက Setup>MAC address Clone ထဲမှာသူ့မူလ၇ှိပြီးသား address ကိုဖျက်ပြီး internet ဆိုင်က ပေးထားတဲ့ ဒုတိယ MAC address ကိုဖြည့်လိုက်ပါတယ်....ပြီး၇င် Save နဲ့ထွက်....
အကယ်၍....Computer တခုပဲ၇ှိပြီး (MAC address တခုပဲအသုံးပြုခွင့်၇ခဲ့မယ်ဆို၇င်အဆင်ပြေ/မပြေဆိုတာကိုတော့ပြောလို့မ၇ပါဘူး (MAC address conflict ဖြစ်နိုင်ပါတယ်)ကျွန်တော်လည်း MAC address 2ခုနဲ့စမ်းခဲ့တာပါ....Router က Linksys routerပါ
Router ကနေအထွက် All computer-Laptop,wifi-mobile,ဘာ pad,ညာ pad အစ၇ှိသည်ဖြင့် wi-fi device အားလုံးအသုံးပြုနိင်ပါပြီ (တနည်းအားဖြင့် MAC filter ဟာကျိုးပျက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်)
နည်းပညာခေတ်မှာ ထိန်းချုပ်မှုအနှောင်အဖွဲ့များမှ အားလုံးကင်းလွတ်ကြပါစေ......
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ azp09 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဇာနည်စိုး, crush, hightechkey, minthumon, nyi.nyi, tu tu, yelinoo, zo
18-11-2011, 03:01 PM
ပို့စ်2ခုအတွက် 8 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
သူများတွေလဲစီးပွားရေးလုပ်နေတာလေဗျာ အဲ့ဒီလိုပွားပြီးတော့သုံးနေမယ်ဆိုရင်တော့ပေးတဲ့လူအနေနဲ့လဲကိုချင်းစာကြည့်ပေါ့ဗျာ ယူထားတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ သင့်သလောက်ပဲပေးမှာပေါ့ဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ chitsanmg19 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
azp09, minthumon, yelinoo
Find More Posts by chitsanmg19
20-11-2011, 04:06 PM
သူများတွေလဲစီးပွားရေးလုပ်နေတာလေဗျာ အဲ့ဒီလိုပွားပြီးတော့သုံးနေမယ်ဆိုရင်တော့ပေးတဲ့လူအနေနဲ့လဲကိုချင်းစာကြည့်ပေါ့ဗျာ ယူထားတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ သင့်သလောက်ပဲပေးမှာပေါ့ဗျာ
သူများရဲ့စီးပွားေ၇းကိုတုတ်နဲ့ထိုးတဲ့ ၇ည်၇ွယ်ချက် နဲ့ post ကိုတင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ဦးစွာပထမ ပြောလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ တစ်ဆင့် ပြန်ပြီး internet line ကိုပြန်ပေးထားတာလုံးဝ မရှိပါဘူး။ကျွန်တော် ၇ဲ့ phone ကို jailbreak လုပ်တာတို့ , cydia ကနေ app install လုပ်တာတို့အစ၇ှိသည်ဖြင့် ....အဲဒီလောက်ကိုပဲသုံးတာပါ။ကျွန်တော်အဲဒီလောက်သုံးလို့လဲ ....Internet Line ပေးသူ၇ဲ့ စီးပွားေ၇းကို မထိခိုက်ဘူးလို့လည်း ယုံကြည်ယူဆပါတယ်။
အဓိက ကတော့ သုံးစွဲသူ၇ဲ့ ၇ည်၇ွယ်ချက် နဲ့ ခံယူတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဆိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဥပမာ...ကောင်းမွန်တဲ့နည်းပညာတစ်ခုပင်ဖြစ်သော်လည်း....မကောင်းတဲ့နေ၇ာမှာမကောင်းတဲ့၇ည်၇ွယ်ချက်ဖြင့်သုံးပါက မကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် မည်သည့်နည်းပညာကိုဖြစ်စေကောင်းမွန်တဲ့နေ၇ာ(သူတစ်ပါးစီးပွားေ၇းကိုမထိခိုက်စေမယ့်နေ၇ာ)မျိုးမှာသုံးသင့်တယ်ဆိုတာကို စာေ၇းသူလည်းသတိချပ်မိပါတယ်။
ဒါကြေင့်ကျွန်တော် အသုံးပြုနေတဲ့ နည်းပညာအပေါ်မှာ မကောင်းမွန်တဲ့စိတ် (တစ်နည်းအားဖြင့်) သူတစ်ပါးစီးပွားေ၇းကိုဒုက္ခေ၇ာက်စေတဲ့စိတ်မျိုးမရှိတာတာကြောင့် ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်လုံပါတယ်။နောက်ပြီး post ကိုဖတ်ပြီး စမ်းကြမဲ့ မိသားစုဝင်မျာကိုလည်း ကောင်းမွန်တဲ့နေ၇ာမှာ...ကောင်းမွန်တဲ့၇ည်၇ွယ်ချက်နဲ့ အသုံးပြုကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။(ဆ၇ာကြီးလုပ်တယ်လို့တော့မထင်စေချင်ဘူး။အခုလိုေ၇းစ၇ာအကြောင်းပေါ်လာလို့ပါ)
ဖို၇မ်မှတာဝန်၇ှိသူ admin များခင်ဗျာ....
ကျွန်တော်၇ဲ့ေ၇းသားချက်ဟာ post topic နဲ့လွဲချော်နေမှန်းသိပါတယ်။ဒါပေမယ့် အကြောင်းအ၇ာကို ဖြေ၇ှင်းချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် သာဒီ post မှာ မလွဲသာပဲေ၇းလိုက်၇ပါကြောင်းအသိပေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အကယ်၍ topic ချော်နေလို့ post ကိုပြောင်းပေးမှ၇မယ်ဆို၇င်လည်း post 2ခုစလုံးကိုပြောင်းပေး ပါ၇န်မေတ္တာ၇ပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား....လေးစားစွာဖြင့်.....
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ azp09 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဇာနည်စိုး, crush, minthumon, yelinoo
26-02-2012, 09:26 AM
ဒီ topic နဲ့ဆိုင်မယ်ထင်လို့ အကူညီတခုတောင်းချင်ပါတယ်။
CPE နဲ့ဖမ်းထားတာကို switch မှာပြန်ခွဲလို့အဆင်ပြေကြလား။ ရသလားသိချင်ပါတယ်ဗျာ။
Filter တွေခံမထားပါဘူး။ ခွဲခွင့်ပေးထားပါတယ်။
စက်၃လုံးသုံးရင် ၁လုံးမရတာ၊ ၂လုံးမရတာတွေဖြစ်နေလို့ပါဗျ။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ hteenan အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
azp09, crush, yelinoo
26-02-2012, 01:41 PM
Originally Posted by hteenan
CPE နဲ့ဖမ်းထားတာ ကို switch နဲ့ပြန်ခွဲ လို့၇ပါတယ်...... MAC Filter ခံမထားဘူးဆို၇င်ပေါ့....... တစ်ချို့ internet ဆိုင်တွေက server မှ CPE ဘူးထဲမှ MAC filter ခံပါတယ်.....
တစ်ချို့က လည်း moderm ရဲ့ wan cable မှ Router မှ CPE ဘူး ထဲကို ၀င်ပြီး လွှင့်တဲ့သူတွေကျတော့ Router ထဲကနေ filter ခံကြပါတယ်....
ထစ်ချို့ကျတော့ လည်း Client ၇ဲ့ CPE ဘူးထဲကနေပဲ filter ခံကြပါတယ်...ပြီးတော့မှ client ၇ဲ့ဘူးထဲ ကို admin မှ လွဲပြီး ၀င်လို့မ၇အောင် username password တွေပြောင်းလိုက်ကြပါတယ်......
်ဒီတစ်လုံးပဲ internet အမြဲ၇ပြီး တခြားအလုံးတွေ internet မ၇ဘူးဆို၇င် တော့ MAC filter ခံထားလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်......
ဥပမာ.... A,B,C ဆိုတဲ့ computer ၃ လုံး၇ှိတယ်ဆိုပါတော့
A compter ကပဲအမြဲ internet ၇နေပြီး B နဲ့ C ကတော့ ဘယ်တော့မှ net မ၇ဘူးဆို၇င် တော့ MAC filter ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ဒါမှမဟုတ်ပဲ တစ်ခါတလေ A computer က net ၇တယ် (တခြား B နဲ့ C ကတော့ မ၇ဘူး )....တစ်ခါတစ်လေကျတော့ B computer က၇တယ် (A နဲ့ C ကတော့ မ၇ဘူး )
......နောက်တစ်ခါကျတော့ C computer က net( A နဲ့ B ကတော့ မ၇ဘူး) ဆို၇င် တော့ MAC ကြောင့်မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး......
မောင်ပေါ်ဦး, bagothar85, hteenan, minthumon, tu tu, yelinoo
အဲလို၊ အဲလို ကွက်တိကြီး။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ hteenan အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
27-02-2012, 11:15 AM
switch ထဲကိုဝင်ပြီး setting တွေထဲကို ၀င်ကြည့်ပါဦး............ ဥပမာ switch ip မှာ DHCP ထားလား ဒါမှမဟုတ် static ip ထားသလား ဆိုတာမျိုး........ အကယ်၍ static ထားတယ်ဆို၇င်အဲဒီမှာ DHCP ပြောင်း
DHCP ထားပြီး လို့မ၇ဘူး ဆို၇င် လည်း static ပြန်ထားပြီးစမ်းပါဦး...( static ip ထား၇င် client tp link box ၇ဲ့ ip နဲ့ class တူတာထားပြီးပေးပါ)
switch ထဲ ကိုဝင်တာနဲ့ configure ချတာတွေကတော့ ..... switch ၇ဲ့ Brand ပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်လို့ user manual guide ကိုသာကြည့် ပြီးဆောင်၇ွက်ပါလို့..........
ကျွန်တော်ကတော့ switch မသုံးပါဘူး ...... wireless Router ခံပြီးသုံးတာ တော့အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်.......
ဇာနည်စိုး, မျိုးဟန်ထက်, မောင်ပေါ်ဦး, bagothar85, g00gle, minthumon, pannuko, yelinoo
24-12-2012, 07:35 PM
မင်္ဂလာပါ.........အကူညီလေးတောင်းချင်လို့ပါ။ ကျွှန်တော်က တီပီ လင့် နဲ့ ချိတ်ထားပါတယ်။အင်တာနက်ကိုပြောတာပါနော်။အဲဒါတခြား လက်တော့ကို ရှယ်ယာလေးပေးချင်လို့ဘယ်လို ပေးရမလဲဆိုတာလေးသိချင်လို့ ပါ။မြန်မာမိသားစုများသိရင်မျှ ဝေပေးကြပါအုံးခင်ဗျာ..........
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ အောင်ကျော်ဆန်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။